स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध : स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादब — Purbicommand
२०७८ चैत्र ११, शुक्रबार १७:३४ गते
उर्लाबारी । प्रदेश नं. १ का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आज मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको बताउनु भएको हो । आगामी बजेट निर्माणको क्रममा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधारका लागि विशेष योजना बनाउने उहाँको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सबै दल र नागरिक समाज एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर प्रदेशकै गहनाको रुपमा रहेकाले यसलाई विकास गर्न चुनौती भन्दा पनि अवसर रहेको बताउनुभयो । संबिधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारलाई प्रत्याभुत गराउन पनि उर्लाबारीको मदन भण्डारी अस्पताललाई विकाश गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको श्रोत साधन र बजेटले भ्याएसम्म अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट डा. रबिकुमार शाहले चालु आव २०७८÷७९ र आगामी आव २०७९÷८० का लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि माग पत्र मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । अस्पतालमा ओपिडि भवन निर्माण तथा मेसिनरी औजार खरिद, एन.आइ.सि.यु सेट, ओ.टि. भवन निर्माण, विशेषज्ञ र फिजिसियन एक÷एक जना चिकित्सक, एचडियु, आईसियु र एसएनसियु सेवा संचालनका लागि कम्तीमा ५ जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरिदिन मन्त्री यादव समक्ष माग गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका सभापति तथा मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका अध्यक्ष नरेश पोखरेलले ५० शैयाको अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा ट्रमा सेन्टर सञ्चालक समितिकी सदस्य टिका भट्टराईले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो भने सञ्चालन गौरब सुब्बाले गर्नुभएको थियो ।